ShweMinThar: မြေအိုးကြက်သားထမင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးထမင်း (Tomato Rice)၊ ညော်ညာထမင်းမွှေးနဲ့ စပါးလင်ကြက်သားကြော်
မြေအိုးကြက်သားထမင်း၊ ခရမ်းချဉ်သီးထမင်း (Tomato Rice)၊ ညော်ညာထမင်းမွှေးနဲ့ စပါးလင်ကြက်သားကြော်
ပေါ်ဆန်းမွှေးဆန် - ၃ ခွက် ( ၅၈၀ ဂရမ်)
ကြက်သွန်နီ - ၂၀၀ ဂရမ် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ကြက်သွန်ဖြူ - ၅၀ ဂရမ် (ပါးပါလှီးထားပါ)
ချင်း - ၇၅ ဂရမ် (အမြှောင်းလိုက်လှီးထားပါ)
ပဲငံပြာရည်အနောက် - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
ကြက်သားမှုန့် - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ၁/၂ ဇွန်း
ဆီ - စားပွဲဇွန်း ၂၀ ဇွန်း
Spice water အမွှေးနံ့သာရည်ကျိုရန်လိုအပ်တာတွေကတော့…
စမုန်စပါး - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း ၁ ဇွန်း
လေးညှင်းပွင့် - ၄ ပွင့်
ရေ - ၄ ခွက်
နံနံပင် - ၅ ပင် (ပါးပါးလှီးထားပါ)
ကြက်ဥပြုတ် - ၃ လုံး (ထက်ခြမ်းခြမ်းထားပါ)
1. ပထမဦးဆုံး spice water ကျိုရန် အိုးအသေးတစ်လုံးထဲကို ရေ ၄ ခွက်ထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် လိုအပ်တဲ့ ဟင်းခတ်အမွှေးအကြိုင်အားလုံးကို ထည့်ပြီး ဆူအောင်တည်ပါ။ ဆူလာရင် မီးဖိုပေါ်မှချပြီး ဆန်ခါဖြင့်စစ်ထားပါ။
2. အဆင်သင့်လှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်နီကို ကြော်ရန်အတွက် ဒယ်အိုးထဲ ဆီ ဇွန်း ၂၀ ထည့်ပြီး ဆီပူအောင်တည်ထားပါ။
3. ဆီပူသည်နှင့် ကြက်သွန်နီထည့်ပြီး နီညိုရောင်သန်းအောင်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ။
4. အိုးထဲမှာရှိတဲ့ ဆီနဲ့ပဲပါးပါးလှီးထားတဲ့ ကြက်သွန်ဖြူကို နီညိုရောင်သန်းအောင်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ။
5. နောက်ဆုံးကျန်ရှိနေတဲ့ ဆီနဲ့ အမြှောင်းလိုက်လှီးထားတဲ့ ချင်းကို နီညိုရောင်သန်းအောင်ကြော်ပြီး ဆယ်ထားပါ။
6. ကျန်ရှိတဲ့ဆီကို ထမင်းချက်ရန်အတွက် ပန်းကန်လုံးတစ်လုံးထဲထည့်ပြီး သိမ်းထားပါ။
7. ပြီးလျှင် ဆန်ကို ရေဆေးပြီး ထမင်းပေါင်းအိုးထဲထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် ကြော်ထားတဲ့ ချင်း၊ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူကြော် ၁ ဇွန်းစီထည့်ပါ။ ပဲငံပြာရည် ၁ ဇွန်းထည့်ပါ။ ဆားနဲ့ ကြက်သားမှုန့်ထည့်ပါ။ ဆီချက် ၂ ဇွန်းထည့်ပါ။ ပြီးလျှင် စောစောက ကျိုထားတဲ့ spice water 2ခွက် နဲ့ ရေ ၂ခွက်ထည့်ပြီး ချက်ပါ။
8. ထမင်းကျက်ရင် ကျန်ရှိနေတဲ့ ဆီချက်နဲ့ ချင်း၊ ကြက်သွန်ဖြူ၊ ကြက်သွန်နီကြော်ထည့်ပြီး မွှေပေးပါ။ ပြီးရင် နောက်ထပ် ၁၀ မိနစ်ခန့်နှပ်ထားပေးပါ။
9. စားသုံးမည်ဆိုပါက ကြက်ဥပြုတ်၊ စပါးလင်၊ ကြက်သားကြော်၊ နံနံပင် တို့နှင့် တွဲပြီးသုံးဆောင်ပါ။
ကြက်သား - ၂ ချောင်း, 360 gm (အရိုးထုတ်ထားပါ)
• ကြက်သွန်နီအသေး - ၂ လုံး
• ငရုတ်သီးမှည့်အစို - ၂ တောင့်
• ကြက်သွန်ဖြူ - ၁ မြွှာ
• ခရုဆီ - စားပွဲဇွန်း ၁ ဇွန်း
• ပျားရည် - စားပွဲဇွန်း တစ်ဝက်
• တရုတ်နှမ်းဆီမွှေး - လက်ဖက်ရည်ဇွန်း၂ ဇွန်း
• ငရုတ်ကောင်းမှုန့်အမည်း - အနည်းငယ်
1. အနှစ်အတွက် လိုအပ်သောပစ္စည်းများအားလုံးကို ကျေညက်အောင်ထောင်းပါ။
2. ပြီးလျှင် ကြက်သားကို Curry Paste နှင့် Marinate ရန်အတွက် လိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းများအားလုံးနှင့်ရောနယ်ပြီး ၁ နာရီ ၊၂ နာရီခန့်နှပ်ထားပါ။(တစ်ညနှပ်ထားလျှင် အကောင်းဆုံးပါပဲ)
3. Electric Oven ကိုသုံးပါက အပူချိန် ၁၈၀’C တွင် ကြိုတင်ပြီး အပူပေးထားပါ။
4. ကြက်သားကင်မဲ့ ဗန်းကို ဆီအနည်းငယ်သုတ်ပါ။ ပြီးလျှင် နှပ်ထားတဲ့ကြက်သားထည့်ပါ။ ပြီးနောက်ကြက်သားကို ဆီအနည်းငယ်သုတ်ပေးပါ။
5. ကြက်သားဗန်းကို ovenထဲထည့်ပြီး မိနစ် ၃၀ ခန့်ကင်ပါ။
6. ကြက်သားကျက်ပါက ovenထဲမှထုတ်ပြီး ထိုင်းငရုတ်သီးဆော့စ်နဲ့သုံးဆောင်ပါ။
ခရမ်းချဉ်သီးထမင်း (Tomato Rice)
ထောပတ်ထမင်း၊ အုန်းထမင်း၊ ပဲထမင်း၊ ဒံပေါက်၊ ကြက်ဆီထမင်းနဲ့ အမျိုးမျိုးသော ထမင်းချက်နည်းတွေကတော့ နားယဉ်ပြီးသားဖြစ်သလို အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲ၊ မွေးနေ့ပွဲတွေမှာ အမြဲလိုလို တည်ခင်းလေ့ရှိကြပါတယ်။ ခရမ်းချဉ်သီးထမင်းကိုတော့ ကိုယ့်ပတ်ဝန်းကျင်မှာ ကြားရခဲပါတယ်။ အလှူပွဲ၊ မင်္ဂလာပွဲ၊ မွေးနေ့ပွဲတွေမှာ အရသာထူးထူးခြားခြားလေးနဲ့ အသစ်အဆန်းတစ်မျိုးနဲ့ တည်ခင်းမိတ်ဆက်ပေးနိုင်ဖို့ မလေးခရမ်းချဉ်သီး ထမင်းချက်နည်းလေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။ ချက်ကြည့်ရအောင်နော်။
ဆန် (Basmati) – ၄ ခွက် (ဆန်ခြင်ခွက်)
နို့စိမ်း – ၂ ခွက်
ရေ – ၃ ၁/၂ ခွက်
ချင်း – ၃ တက်
ခရမ်းချဉ်သီး – ၂ လုံး (အနေတော်)
ခရမ်းချဉ်သီးအစား Tomato Puree ကို သုံးနိုင်ပါတယ်။
ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် – ၃ ဇွန်း (Tomato Paste)
သစ်ကြံပိုးခေါက် – ၂ ချောင်း (အသေး)
ဆွမ်းမွှေးရွက် – ၂ ရွက်
၁။ ဦးစွာ ဆန်ကို ရေဆေးပြီး ရေ၊ နို့စိမ်း၊ ဆား၊ သကြားနှင့် ဆွမ်းမွှေးရွက်တို့ကို ထည့်၍ အသင့်ပြင်ထားပါ။
၂။ ကြက်သွန်နီ၊ ကြက်သွန်ဖြူနှင့် ချင်းတို့ကို ရောပြီး ကြိတ်ထားပါ။
၃။ ခရမ်းချဉ်သီးသုံးပါက သေးသေးစိတ်ထားပါ။ အရောင်လှစေရန် ခရမ်းချဉ်သီးအနှစ် သုံးခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
၄။ အားလုံးအသင့်ဖြစ်ပါက ဒယ်အိုးတစ်အိုးကို အပူပေးပြီး ဆီထည့်ပါ။ ဖာလာစေ့၊ လေးညှင်း၊ နာနတ်ပွင့်နှင့် သစ်ကြံပိုးခေါက်တို့ကို ထည့်ပြီး ဆီသတ်ပါ။
၅။ အနံ့မွှေးလာပါက ကြိတ်ထားတဲ့ ကြက်သွန်အရောကို ဆီသတ်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီး အနှစ်ထည့်ပါ။ ခရမ်းချဉ်သီးထည့်ပြီး အနံ့မွှေးလာလျှင် မီးပိတ်ပြီး အသင့်ပြင်ဆင်ထားသော ထမင်းပေါင်းအိုးထဲသို့ထည့်၍ သမအောင်မွှေပေးပြီး ခလုတ်နှိပ်ကာ ချက်ထားပါ။
၆။ ၁၀ မိနစ်ခန့်တစ်ကြိမ် အထက်အောက် မွှေပေးပါ။ ခလုတ်ပြုတ်ပြီး ထမင်းကျက်လျှင် ရနံ့သင်းပျံ့ အရသာဆိမ့်လှတဲ့ ခရမ်းချဉ်သီးထမင်းကို နှစ်သက်ရာ ကြက်သား၊ ကြက်ကြော်၊ သီးစုံသနပ်သခွားသီးတို့ဖြင့် တွဲဖက်တည်ခင်းနိုင်ပါပြီ။
Posted by Alex Aung at 5:45 AM